अनिशाले अन्तिम पटक कन्चनको मुख हेर्छु भने पछी…. यस्तो छ अनिशाको घरको माहौल (भिडियो हेर्नुस्) – Ramailo Sandesh
पूर्वी चितवनका कञ्चन तिमल्सिना र अनिशा कुमालको प्रेम प्रसंगले २ महिना यता ठूलो चर्चा पायो । काठमाडौँमा विवाह गरेर चितवन गएपछि अनिशा आफ्नै घर फर्किइन् । कालिका नगरपालिका–६ खोलेसिमल गुराउचौरमा प्रेम सम्बन्धमा रहेका कञ्चनलाई अनिशाको परिवारले अलग गराइ दिएको थियो । उपचारका क्रममा ६६ दिनपछि उनै २१ वर्षीय कञ्चनको भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । अनिशाले अन्तिम पटक कन्चनको मुख हेर्छु भने पछी…. यस्तो छ अनिशाको घरको माहौल (भिडियो हेर्नुस्)कञ्चनको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले १७ वर्षीया अनिशाको घर घेरेका छन् । जसका कारण उक्त स्थान त ना व ग्रस्त बनेको छ ।